Madaxweyne Xasan oo Sheegay in uusan Dam-jadiid ka tirsanayn – Radio Daljir
Oktoobar 14, 2015 5:40 b 0
Arbaco, Oktoobar 14, 2015 (Daljir) — Madaxweynaha jamhuuriyadda federalka ah ee Soomaaliya Mudane Xassan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inuu yahya musharax u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya, kadib marka uu dhamaado waqtiga dowladda uu hogaamiyo.
Xassan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladda federalka ah ee uu hogaanka u yahay aysan diyaar u ahayn inay waqtiga kororsato. laakiin uu diyaar u yahay inuu markale xilka isu soo taago lana tartamo dadka doonaya inay Isbede sameeyaan.
Dhanka ka kalena madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa beeniyey kamid ahaan shaha qudhiisa ee koox ama urur gaar ah sida Damu-jadiid iyo Al-Islaax, wuxuuna tilmaamay in hogaamiye kasta uu leeyahay dad khaas ah oo latalin u sameeya.
Ugu dmabayntiina Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya ayaa beeniyey warar sheegayey in Isbedl lagu samayn doono calanka Soomaaliya, taasi oo ay hadal hayeen warbaahinta afka Soomaaliga wax ku qorta iyo bulshada Soomaaliyeed.